अष्ट्रेलियाको सिप:नेपालमा स्वरोजगारी - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियाको सिप:नेपालमा स्वरोजगारी
Posted by Himalayan Kangaroo | २४ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०२:४४ |
२३ फाल्गुन , चितवन
कफी हाउसमा कफी खानेको भीड हुनु त स्वाभाविकै हो, सिक्न पनि जान्छन् । देश छोड्नु राम्रो होइन । देश छोडेर विदेशमै बस्नु झन् राम्रो होइन । तर, विदेशमा सीप सिकेर स्वदेशमा उद्यम गर्नुचाहिं अति उत्तम ! उद्यम मात्रै हो र, विदेशमा सिकेको सीप यहींका युवालाई सिकाउँदै छिन् भरतपुरकी आश्मा तिमिल्सिना ।
उनी १० वर्ष अष्ट्रेलिया बसिन् । अनेक सीप सिकिन् । कफी बनाउन दख्खल छिन् । फर्किएर भरतपुरको बाइपास रोडमा कफी हाउस सञ्चालनमा ल्याइन् । ग्लोबल कफी हाउस उनको आउटलेटको नाम हो । कफी पारखी झुम्मिछन् उनको पसलमा । कफी हाउसमा कफी खानेको भीड हुनु त स्वाभाविकै हो, सिक्न पनि जान्छन् ।
एउटा व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धी बढ्नु घातक हुनसक्छ । आफ्नो सीप अरुले सिकेर आफैलाई मार हान्न सक्छ व्यवसायमा । ‘रेसिपी’ आ–आफ्ना हुन्छन् परिकारमा । कफीमा पनि । तर, उनी निर्धक्क सिकाइरहेकी छन् अरुलाई पनि । कफी बनाउन । अझै मीठो बनाउन । जिब्रोमै झुण्डिने !
बाइपास रोडमा आँखा अस्पतालसँगै छ उनको कफी हाउस । कफी बनाउने तरिका सिक्नेहरु पनि राम्रै उपस्थित हुन्छन् । “मैले जानेको सीप सदुपयोग गर्दै अरूलाई पनि सिकाउँछु”, आश्मा भन्छिन्, “मेरो व्यवसाय पनि हुने, अरुले पनि उद्यम गर्ने ।” उनले कफी बनाउने तरिकासँगै हस्पिटालिटी ट्रेनिङ पनि दिन्छिन् । “वेटर र वेट्रेसको तालिम पनि दिने गरेकी छु”, उनी भन्छिन्, “यहीं व्यवसाय गर्दा राम्रो, होइन विदेश जान्छु भन्ने हो भने पनि सीप त अनिवार्य चाहिन्छ ।” विदेश जान खोज्नेलाई पनि केही सिकेर मात्रै जान उनी सुझाउँछिन् ।
आश्माले स्मल हेभन स्कूल आँपटारीबाट एसएलसी पास गरेकी हुन् । पछि बालकुमारी कलेजमा व्यवस्थापनमा १२ कक्षा सकिन् । त्यसपछि अस्ट्रेलिया पुगिन् । हेल्थ साइन्समा ब्याचलर गर्दै हस्पिटालिटीसम्बन्धी काम गरिन् । १० वर्ष बिताएर नेपाल आएपछि पनि खाली बस्न सकिनन् । आफ्नै घरमा व्यवसाय सुरु गरिन् ।
आउटलेट राम्रो बनाएकी छन् । करिब १५ लाख खर्च गरेकी छन् । उनीसँग कफी बनाउनको लागि ‘लाचिङ बाली’ नामको इटालियन मेसिन छ । यो मेसिनको मूल्य करिब ७ लाख पर्छ ।
कफी बनाउने सामान्य तालिम लगभग बीस दिनमा पूरा गर्न सकिने उनी बताउँछिन् । “जति बढी तालिम लियो, कफीको स्वाद र सुन्दरता उति नै बढ्दै जान्छ”, उनले भनिन्, “हात बसेपछि काम राम्रो हुन्छ ।” तालिमबापत ठूलो रकम लिँदिनन् । इच्छाशक्ति भएकालाई खुसी भएर काम सिकाउँछिन् । सिकाइमा खपत भएको सामग्रीको खर्च भने सिकारुले व्यहोर्नुपर्छ ।
नेपालमा काठमाडौंमा कफी पिउनेहरू उल्लेख्य संख्यामा भए पनि काठमाडौं बाहिर कफीको बजार विस्तारै वढ्दै छ । पोखरासँगै चितवनमा पनि कफी पारखीहरू छन् । “कफीबाट ग्राहक सन्तुष्ट हुन पहिलो कुरा स्वाद नै हुनुपर्छ”, उनी भन्छिन्, “अर्को कुरा सुन्दरता हो । यो हातको सफाइमा भर पर्छ ।”
कफी सपमा हट कफी, कोल्ड कफीसँगै कफीबाट बन्ने विभिन्न आइटम र विशेषगरी मिल्क सेकहरू उपलब्ध रहेका छन् । चितवनका बजारमा खुलेका कफी सपमा भन्दा सहुलियत दरमा कफी उपलब्ध गराइएको आश्माको दावी छ ।
Nextउकालो लाग्दै डलरको भाउ, यस्तो छ आजको लागि अष्ट्रेलियन डलरको दर भाउ
पराकम्पन जाने क्रम रोकियो
३ जेष्ठ २०७२, आईतवार ०१:५५
संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न काँग्रेसले पदाधिकारी वैठक बोलायो
१३ मंसिर २०७३, सोमबार ०३:१७
ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्ड : विदेशीसहित २५ दोषी
१७ चैत्र २०७३, बिहीबार ०२:२२
अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा हुने एनआरएन क्षेत्रीय सम्मेलनको तयारी पूरा
२५ बैशाख २०७६, बुधबार ०१:०१